How'd it happen and more reports?: Work Permit for foreign domestic worker!
အစိုးရကပိတ်ထားတယ်တယ်တာပြောတယ် လာလိုက်တဲ့ အိမ်ဖော်ရွှေမမလေးတွေ အသက်မှာ အလွန်ဆုံးရှိ ၂၀အောက်လေးတွေ ...ဘယ်လိုနည်းတွေနှင့် ထွက်လာကျပါသလဲ?
ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ Maid Agency လဲဗျ... မြန်မာမလေး ၃ယောက် လေဆိပ်က ရထားလက်မှတ်ရုံနားမှာ ယောင်ချာချာ
ဖြစ်နေတာတွေ့လို့ ခေါ်မေးကြည့်လိုက် အင်္ဂလိပ်စကာလဲးမရဘူးဗျ...ဘယ်သူတွေလာခေါ်မလဲလိုမေးကြည့်တာ Agencyကအပြင်ထွက်ခဲ့လို့ပြောတယ်တဲ့ ..
အဲဒါနှင့် MRT အထိရောက်လာတယ်လေ..,,
ဒါနှင့်ဖုန်းပေးလိုက်ပြီး အပေါ်ပြန်အတပ်မှာ လာကြိုတဲ့သူတွေနှင့် တွေ့သွားကျတယ်.,,
ဟူး... ဒီလောက်ထိ စွန့်သားကိတဲ့ရွှေ အိမ်ဖော်မလေးတွေ စကာင်္ပူမဟုတ်ဘဲ တခြားနိုင်ငံဆိုရင် ဒီချလးမတွေရဲ့ဘ၀ကို
စကာင်္ပူမှာအိမ်ဖော်တွေကို ဘယ်လိုခေါ်ကျပါသလဲ?
ဒီမှာ အိမ်ဖော်တွေ ဘယ်လိုနည်းတွေနှင့်လာ အလုပ်ကျပါသလဲ?
တချို့တွေ့ဖူးတဲ့ အထဲမှာ တချို့ အတွေ့အကြုံများတဲ့ အိမ်ဖော်တွေကတော့ အပြင်မှာ ကိုယ်ဟာကိုယ်
အိမ်ဌားနေပြီး အလုပ်ဆင်းတာတွေတွေ့ဖူးတယ်...လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချစ်ချစ်လေးတွေနှင့်လဲ အတူနေကျတများပါတယ်...ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အိမ်ဖော်ပါမစ်တေါရလဲ? အများအးဖြင့် ခလေးရှိကျတဲ့ PR သို့ ဆင်းရဲတဲ့ စကာင်္ပု တွေဆီက နေ အိမ်ဖော်ပါမစ်ဝယ်ကို ဒေါ်လာ ၄၀၀၀လောက်နှင့် ၀ယ်ကျပြီးနေကျပါတယ်တဲ့...
သူတို့က ဒီမှာ အလုပ်ဆင်းနေကျတဲ့ အင်ဂျင်နီင်္ယာတွေထက် နာရီပေးရငွေ များတယ်နော်အထင်မသေးလိုက်ပါနှင့် တစ်နာရီ ဒေါ်လာ ၂၅ ရတယ်ဗျ၊တစ်ရက်ကို ၂အိမ် ၃အိမ်လောက် တအိမ်ကို ၂နာရီလောက် နှင့် ရက်တွက်ခ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကနေ ၁၅၀ လောက်တော့ ရကျပါတယ်၊ ဒီလိုအပတ်တိုင်း ပုံမှန်ဆင်းပေးလိုက်ရုံပါဘဲ... တလဆိုရင် တွက်တာကြည့်လိုက်တော့ ...
Posted by Ko Nge at Wednesday, June 24, 2015
Labels: ဖြစ်ရပ်မှန်, လူထုအော်သံ, လူမှုရေး, အထူးသတင်း, ငွေကြေး, နိုင်ငံခြား